Kimberli Nikson: career kanye naye movie
Kimberli Nikson - actress abasha British. Futhi-ke, lapho eqala umsebenzi wakhe futhi lapho le bhayisikobho eyayenziwe, sizobheka kamuva kulesi sihloko.
Kimberly wazalelwa e Bristol, kodwa kamuva wathuthela futhi ngakhulela edolobheni Welsh ka Pontypridd. actress Ikusasa wafunda Royal College of Music futhi Drama eCardiff. Ngemva Prom usayine isivumelwano ne-Hollywood inkampani enkulu Universal Studios. Yingaleso sikhathi-ke, waqala wenza umsebenzi Nkz Nixon.
indima yakhe yokuqala Kimberly wathola, ngesikhathi abasolwa ochungechungeni okukhulu "Cranford" (2007 - 2009), ositshela ngokuphila lesifunda elincane okwakuhlala. Le phrojekthi eyathatha zonyaka ezimbili, futhi, endleleni, waphumelela ngempela. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi ngonyaka ozayo alethwe actress izindima letinengi letesekela kumafilimu ezifana "Angus, thongs futhi Esiphelele Snogging," "Wild Child" futhi "Kulula Ubuhle".
Le nhlangano yenkolo yokulwela lwaphezulu
Le filimu elilandelayo Starring Nikson Kimberli baba idrama British "Cherry Bomb" (2009), elichaza udweshu phakathi abangane ababili, kwadingeka iso lakhe intombazane. Ngemva konyaka, futhi actress lithole indima nesekelayo adventure Thriller "Black Death", mayelana neqembu izindela yenza ngokuphelelwa yithemba, baye luhlose ukuthola ungungqondongqondo, able kuze dlweza sabantu ababulawe isifo. Ngo-2011, wathola indima yansukuzonke ku ochungechungeni TV "thwala futhi isihlengo", isitshela indaba uchwepheshe ukuxoxisana abathumbi.
Kungokufanayo 2011 Kimberly waletha enye indima encane idrama impi "Ukumelana" umqondisa Amit Gupta, lapho abesifazane abaningana ukuthola ukuthi lapho wonke amadoda olahlekile ka esigodini sabo. Khona-ke actress waba nengxenye ukuqopha yochungechunge ahlekisayo "Fresh Inyama" (2011) mayelana nenkampani abafundi-ngonyaka wokuqala, babeqala ngqá ekhaya.
Kuyisono, kodwa ambalwa movie elilandelayo nge Kimberley Nixon iwine izindima yakhe yokuqala. Thola okungenani idrama zomculo, "Yilokho nje!", Ikuphi ekutshela ngemphilo azungezwe isikole esibanzi 70s. Lo mlingisi nje walahleka phakathi kwezinye izindima asekelayo.
Rayan Endryus - iqondiswe Thriller "Alfie Hopkins" (2012) mayelana detektivschitse intokazi eyisithulu ukuzingela emzaneni - akuyona ahlonishwe Owesifazane Starring. Umqondisi kuphela Ron nommese wabona okuthile Kimberli Nikson, ngakho wamcela ukudlala umlingisi losemcoka ubugebengu bakhe idrama "Outlaw" (2012).
Iqhaza eyinhloko sokulinda wakhe njengoba ngo-2012. Khona-ke actress wamenywa ukuba inkanyezi kule ahlekisayo "Hebburn" chungechunge, olwadonsa zonyaka ezimbili. Futhi umsebenzi wakhe wokugcina kwaba uchungechunge British "Fresh Igazi" (2016) mayelana ukuba siqashe abaseshi ababili abasha abasebenzisa engavamile kakhulu indlela Wezindaba ukudalulwa. Ngaphezu kwalokho, lomsebenti ukhokhelwe kahle etholwe izethameli, kodwa ngekusasa lakhe ayikaziwa.
Uhlu Film Kimberli Nikson, ngokuvamile, ingenkulu kakhulu, futhi labo amabhayisikobho lapho igama layo likhona yabalingisi main esingaphansi ngisho kwaleso. Nokho, phakathi kwabo kukhona i-amaphrojekthi ambalwa ayakufanelekela. Phawula ezidume kakhulu.
"Kulula Ubuhle" (2008)
John Whittaker - ilungu lomndeni IsiZulu ahlukile, ukushaqeka okukhulu ezihlotsheni zakhe. Nokho, le nsizwa emadlebeni uthandana ubuhle uninhibited American Larita, ngakho nawo waba nendima lomshado. Futhi manje, ujabule kokuchitha labo langemva komshado, lo mbhangqwana uya bahlala mansion big kaJohane umndeni.
umlingiswa oyinhloko kuphela akukafiki kuze kufike ubutha ngokumelene abazali bomyeni wakhe usethe. Zithanda noma zingathandi, indodakazi izinkomba abaningi ezingafanelanga indodana yabo. Futhi hhayi aneliseke isabelo sabo: Emasiko, umsuka umakoti, kulula kakhulu ukuba ukuqhuba, kanye le nto embi kakhulu wukuthi lokhu akuyona umshado wokuqala Larita. Ngokuvamile, le ntombazane kuyomelwe baye ngokusebenzisa okuningi futhi okuningi ukujwayela, uma kuyindodana, yebo, uthanda umyeni wakhe.
Muva nje, Tomi niks esesezulwini lwesikhombisa. Intombi yakhe (Kimberli Nikson), nabo wayehlele ukuchitha ingxenye esele yokuphila kwakhe, ekugcineni wakhuleliswa kuye. Sekuyisikhathi eside Babelangazelela ukuthi babe ndawonye ukukhulisa umntwana ongakazalwa, kodwa kusihlwa eyodwa nje thugs ambalwa ashabalala ngokuphelele izinhlelo zabo.
Uma intombazane wahlaselwa futhi washaywa, okuholela kwesisu. Tom enquma okuziphindiselela icala, kodwa noma kunjalo wokuqonda ukuthi ubani owenze le kuhlasela owawubonisa isibindi, amashinga kubo basejele. Nokho, le nsizwa ngeke ulindele ukuba akhulule, kubonakala kwesokudla ukuze baziphindiselele kubo on ensimini lesikhungo kwezimilo. Kodwa okokuqala Tom kuyodingeka ukuthola indlela ezokwenza ukuqinisekisa kuye endaweni esitokisini.
Izinhlamvu main yochungechunge, Jack Sarah (Kimberli Nikson) futhi, base bekhona kakade esimweni esivamile. Njengoba sekuyiminyaka emcimbini e-Las Vegas, guys ephaphama abasanda kushada. Futhi manje, kulesi ejabulisayo, bazobambisana uvakashele Jack - emaphandleni isiNgisi, ongenakwenziwa kakhulu abafundile labantu.
Yiqiniso, bona zikhathazekile ngoba umqondo nesethi yemibuzo ngamunye. Indlela ukwethula izindaba? Izihlobo asabele kanjani kulokhu? Futhi indlela, ngokuvamile, bazophila khona? Konke lokhu kungenxa Jack noSara ukuthola lapho zifika. Yiqiniso, umkhaya Jack sika cishe asilahle izenzo zakhe, kodwa kwakuyindlela abasabela ngayo ukuba abashadayo ngokusobala aliwona esiyingqayizivele.
Izingane Borodinoy Ksenii: Maroussia futhi Teona
Umculi uVladimir Lebedev
Umsebenzi Rezhiserskie futhi Filmography Kirill Pletnev
Korea, Idol: Uhlu enhle kunazo (isithombe)
Otitis abezindaba indlebe: ukwelashwa ekhaya. Ukusetshenziswa kwemithi kanye amakhambi abantu
Okufanele ukulindele uma amazinyo akho iwa ephusheni?
Arda 3 *, Bulgaria: izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Indlela yokususa igciwane?
Radisson Sas Park Inn 4 *, Sharm El Sheikh: izibuyekezo, izithombe
Yini ulwandle ingaphezu Indian noma Atlantic? Umlando kokutholakala Indian kanye ne-Atlantic Ocean
Izici zobuhlanga. izici kwedemografikhi amaqembu omphakathi. Isayensi Ukucwaninga
Porsche 924 - ubuhle okungenakuqhathaniswa
Yakutsk: nokuzwa, umlando, ukubuyekezwa
Ukuchelela okuzenzakalelayo izitshalo zasendlini ngezandla zabo. Uhlelo okuzenzakalelayo ukuthambisa houseplants